Emhlabeni wanamuhla wedijithali, sonke sizwe ngezinzuzo zokwethula iwebhusayithi, ukudala ubukhona be-inthanethi nokuguqula izivakashi zesayithi zibe ngamakhasimende akhokhelayo.
Ukuqala iwebhusayithi kuyathokozisa kepha kumane nje kuyisiqalo sokuqhakambisa ibhizinisi online. Ukuqinisekisa ukuthi kutholakala ezinjini zokucinga futhi ukukuthola phezulu kwemiphumela yakwaGoogle yilapho umsebenzi onzima uqala khona.
Nayi indaba esheshayo kuwe. Kumayelana nomnikazi webhizinisi obeka izinyanga zesikhathi nomzamo kwiwebhusayithi entsha ecwebezelayo ukukhuthaza izinsizakalo zayo nemikhiqizo. Naphezu kwemizamo nemizamo emihle yokufukula ithrafikhi, iwebhusayithi ihlale isezingeni lamanani ezinjini zokucinga futhi utshalomali lwehlulekile ukuguqula lube ukwanda kokuthengisa.
Uzwakale ujwayelekile? Ngenhlanhla, akufuneki kube njalo. Ngokusetshenziswa kwe-SEO kanye ne-analytics yewebhusayithi, iwebhusayithi ingaguqulwa ukuze izoshaya izindawo eziphezulu lapho kuseshwa ku-inthanethi.
Njengakwezinto eziningi empilweni, ukusebenzisa ubuchwepheshe obuncane kungahamba ibanga elide uma kukhulunywa nge-SEO. Cabanga ngomehluko phakathi kokusebenza ejimini wedwa noma nomqeqeshi wakho. Imiphumela icishe ibe ngcono, isheshe futhi ihlale isikhathi eside lapho isebenza nomqeqeshi. Kusetshenziswe indlela efanayo ekwakheni ubukhona be-inthanethi obuyimpumelelo ngokufaka isicelo sokusekelwa kochwepheshe be-SEO nabezentengiso ukusiza ibhizinisi lakho ukuthi likhuphuke ngamazinga ezinjini zokucinga.
ISemalt yakhiwe yiqembu labachwepheshe abanjalo futhi ibilokhu isiza amaklayenti emhlabeni wonke ukukhulisa iphrofayli yabo eku-inthanethi isikhathi esingaphezu kweshumi leminyaka. Ake sibheke ukuthi bangobani nokuthi benzani.
Kafushane nje, iSemalt iyi-Full-stack Digital Agency ngenhloso yokwenza amabhizinisi online aphumelele. Ngendlunkulu eKyiv, e-Ukraine, uSemalt usebenza namakhasimende emhlabeni wonke ngokunikezela nge-SEO ukukhuthaza, ukuthuthukiswa kwewebhu nezinsizakalo zokuhlaziya ezisezingeni eliphakeme, kanye nokwakha okuqukethwe kwevidiyo echazayo.
ISemalt iyiqembu labangaphezulu kwe-100 bokuqamba kwe-IT nabathengisi bezentengiselwano - kanye ne-turbo yezilwane ezihlala kuzo - nezimpande zazo zibekwe ngokuqinile kubuchwepheshe be-digital. Ngokusebenza ngokubambisana kanye nokwabelana iminyaka yobuchwepheshe, iqembu leSemalt lidale isisombululo soqobo se-SEO ukusiza amakhasimende ukufinyelela ekufiseleni kakhulu ezikhundleni ze-inthanethi - phezulu kwemiphumela yokusesha yakwaGoogle.
Njengoba nje noma ngubani osebenzisa i-intanethi ezokwazi, ukuvela ezindaweni eziphezulu zemiphumela yenjini kusesho igolide eku-inthanethi. Ayigcini nje ngokukhulisa ukubonakala futhi kukhuphule ukugcwala kwewebhu, kepha ngamabhizinisi online, nawo kungaholela ekuheheni abathengi abaningi abakhona kanye nokwanda kokuthengisa.
Ngakho-ke isebenza kanjani? Ngokuyisisekelo, kunezindlela ezimbili ongakhetha kuzo: I-AutoSEO ne-FullSEO. Kepha okokuqala, kulabo kini abangakaqiniseki ngezincazelo ze-SEO, nansi inkambo yokuphahlazeka okuncane.
I-SEO imele i-Search Enjini. Lokho kusho ukuthi izinjini zokucinga ezifana ne-Google zingathola i-athikili yakho, ibhulogi, noma iwebhusayithi phakathi komhlaba ominyene kokuqukethwe online futhi ikubeke emiphumeleni yazo yokusesha. Okuqukethwe okulungiselelwe okuningi kungama-algorithms enjini yokucinga, bese kuthi ukuphakama emiphumeleni kuzovela.
Kuzwakala kulula kodwa izinjini zokusesha zishintsha ama-algorithms wazo, okusho ukuthi kungenzeka ukuthi zisebenze ngonyaka owedlule, ngeke zisebenze kulo nyaka. Kukhona izindatshana ezingenakubalwa ezitholakala ku-inthanethi namathiphu wokwenza kahle i-SEO, kepha elinye lamathuluzi asebenza ngempumelelo ukusebenzisa amagama asemqoka kuyo yonke iwebhusayithi. Ngemuva kwalokho, ufuna ukucabanga ngamathegi e-meta, okwandisa izihloko nezithombe, ukuxhumanisa ukwakha nokwakha okuqukethwe okungafani nenye.
Konke lokhu okungenhla kuthatha isikhathi nokuhlelela, futhi kubaninimabhizinisi abaningi, isikhathi siyigugu (noma ngezinye izikhathi impahla engandile). Yilapho izinsiza ezifana ne-AutoSEO ne-FullSEO zingasiza.
I-AutoSEO iyithuluzi elenzelwe amabhizinisi amancane afuna ukukhulisa ithrafikhi yesayithi kepha kungenzeka angajwayelani ne-SEO futhi angafuni ukwenza imali enkulu aze abone imiphumela yangempela.
Insizakalo iqala ngombiko omfushane ngesimo esikhona sewebhusayithi, kulandele ukuhlaziya okugcwele kochwepheshe be-SEO ukubona amaphutha nokukhombisa ukuthuthuka okufanele kwenziwe. Unjiniyela we-SEO wabe esekhetha amagama angukhiye akhiqiza ithrafikhi ahambelana newebhusayithi kanye nebhizinisi alikhuthazayo. Okulandelayo, ubuchwepheshe bukaSemalt buqala ukwakha izixhumanisi ezinsizeni ezihlobene ne-niche, ezinamasayithi akhethwe ngokuya ngobudala besizinda kanye ne-Google Trust Rank.
Lapho amathuluzi esekhona, uSemalt unikeza abathengi izibuyekezo zansuku zonke zamagama angukhiye aklelisiwe, nemibiko yokuhlaziya ejwayelekile yokuhlola ukusebenza komkhankaso.
I-FullSEO ihlinzeka ngezixazululo ezihlanganisiwe ze-SEO zamabhizinisi amakhulu, abantu abanezinkampani eziningana, noma kulabo abalungele ukutshala imali enkudlwana ukuze bakwazi ukusebenzisa iwebhusayithi futhi basebenzise i-SEO.
Insizakalo ye-FullSEO ilandela imigomo efanayo ne-AutoSEO, kepha izixazululo eziphakanyisiwe zincike ekuhlolweni okujulile, kufaka phakathi ukubuyekezwa kwabaqhudelana, futhi iqinisekisa ukukhula okuphezulu kwethrafikhi yewebhusayithi ngesilinganiso esiphakeme sokuguqula. Ngokuyisisekelo iyithuluzi lokuthumela iwebhusayithi phezulu kwemiphumela yokusesha yakwaGoogle - ngokushesha.
Ngokusebenzisa i-FullSEO, iqembu likaSemalt liqinisekisa ukuthi iwebhusayithi ihambisana ngokuphelele namazinga we-SEO. Lokhu kwenziwa ngokwenza kahle isiza ngaphakathi nangokulungisa amaphutha, njengokudala amathegi we-meta wamagama angukhiye, ukuthuthukisa ikhodi ye-HTML yewebhusayithi, ukususa izixhumanisi ezaphukile nokwandisa ukuxhumana kwewebhusayithi. Ezinye izinzuzo zephakeji ye-FullSEO zifaka usizo oluphelele kusuka kwaSemalt ekuthuthukisweni kwewebhusayithi kanye nasekudalekeni kokuqukethwe okuphathelene ne-SEO. Umphumela uba ukubuyiselwa okuhle kokutshala kanye nemiphumela yesikhathi eside.
Njengoba kungenzeka ukuthi uqagele manje, ukhiye ngemuva kwezinsizakalo ze-SEO zikaSemalt ukusetshenziswa kwe-analytics ukudala ikhambi elihlukile kwikhasimende ngalinye. Kodwa-ke, igama elithi "iwebhusayithi analytics" lingakhipha ukudideka, ngakho-ke ake sibukeze ukuthi kusho ukuthini nokuthi inqubo isetshenziswa kanjani eSemalt.
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi kuyithuluzi elisetshenziselwa ukubheka ukusebenza kahle kwezentengiso ezenziwa online, kanye nokulandelela isikhundla semakethe sebhizinisi lakho nabancintisana nabo.
Ukuqapha njalo kubalulekile ukuze uqonde ububanzi obugcwele bemakethe yebhizinisi. Akusizi nje kuphela ukusungula amagama asemqoka afanele we-SEO nokubeka iso ekusebenzeni kwabaqhudelana, kepha futhi kungakhomba amathuba amasha wokuthuthukiswa komkhiqizo ngokwesifunda, noma izindlela ezintsha zokusatshalaliswa komkhiqizo.
Iphakheji ye-Semalt inikeza ukufinyelela kuyo yonke idatha yokuhlaziya edingekayo ekulandeleleni ukukhula kwewebhusayithi futhi ichonge noma yiziphi izithiyo ezingaba khona. Kufaka izibuyekezo zesilinganiso sangempela sesikhathi, imibiko enelebula elimhlophe yokulethwa kwemiphumela nokulayisha idatha ongayikhetha nge-API ye-Semalt. Kuyindleko ephansi kepha yakha imininingwane ewusizo yokusiza ukwazisa ngamasu we-SEO. Ukusetshenziswa kwe-analytics yewebhusayithi kuyingxenye ebalulekile yepuzzle ye-SEO futhi, ngosizo lochwepheshe, lungasetshenziswa ukuguqula isayithi libe ithuluzi lebhizinisi eliphumelelayo.
Amakhasimende kaSemalt ajabule
USemalt usebenze kumawebhusayithi angaphezulu kuka-5000 kanti uhlu lwamakhasimende lufinyeleleka emhlabeni wonke ngamabhizinisi asuka kwezempilo nasekusebenzeni kahle ukuya kubuchwepheshe kanye nempahla. Amakhasimende amaningi ajabule abike imiphumela emihle nge-Semalt ethola ukubuyekezwa okuphezulu njalo ku-Google naku-Facebook.
Elinye lamaklayenti ajabulisayo umthengisi we-Intanethi osuselwa e-UK ochwepheshe bemikhiqizo yezinyosi eluhlaza kanye noju. Inhloso bekungukwenza inkampani ibe sezingeni eliphezulu le-10 kuGoogle futhi ikhuphule ukugcwala kwabantu kwiwebhusayithi. Ezinyangeni eziyisithupha zokusebenzisa insiza ye-FullSEO, ithrafikhi inyuke ngamaphesenti angama-4,810, ukuvakashelwa kwamawebhusayithi njalo ngenyanga kukhuphuke ngo-12,411 futhi isibalo samagama asemqoka kuGoogle TOP-100 sakhuphuka sisuka ku-147 saya ku-10,549. Iklayenti liphinde lafakwa ebhokisini le-“People People Ask” leGoogle, futhi likhuphula amandla okugcwala esizeni.
Wenze kanjani uSemalt? Imiphumela yazuzwa ngokuqala ngokubalwa kwezimali kwezobuchwepheshe okujulile ukubona izindawo ezidinga ukwenziwa ngcono. Ukuhlolwa kwamabhuku kwalandelwa isu lokuvuselela iwebhusayithi, njengokusebenzisa i-PageSpeed, ukulungisa kabusha iwebhusayithi nokwakhiwa kokuqukethwe kwe-SEO. Ngemuva kwalokho, uSemalt waqala ukukhuthaza iwebhusayithi njengengxenye yephakeji ye-FullSEO ngomkhankaso wokwakha isixhumanisi osezingeni eliphakeme. Abanye, njengoba besho, umlando.
Ukuthola izifundo eziningi zamakhasimende e-Semalt ajabule, vakashela iwebhusayithi lapha.
Manje njengoba kuchazwe i-SEO kanye ne-analytics ye-webhusayithi, kunjani ukusebenza noSemalt?
Okokuqala, iSemalt iyinkampani yomhlaba wonke ukuthola ulimi olujwayelekile akuyona inkinga. Amalungu eqembu akhuluma isiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane nesiTurkey, phakathi kokunye.
Okwesibili, ukuqala nge-AutoSEO kulula ngesivivinyo sezinsuku eziyi-14 ngama- $ 0.99 nje. Lokhu kulandelwa inketho yokukhetha uhlelo oluzosebenza inyanga eyodwa, izinyanga ezintathu, izinyanga eziyisithupha noma unyaka owodwa. Kuyindlela enhle yokusampula insiza ngaphambi kokugxumela ku-FullSEO.
Ekugcineni, uSemalt unikeza ukusekelwa kwamakhasimende i-24/7, okusho ukuthi noma ngabe ukuphi emhlabeni, ungaxhumana nelungu leqembu ukuthola usizo nezeluleko. Ungahlangana nethimba online ngokuvakashela ikhasi elithi About us kuwebhusayithi.